Suuqyada lacagaha iyo siyaabaha ay u shaqeeyaan.
Suuqyada lacagaha iyo siyaabaha ay u shaqeeyaan
Suuq xor ah waxaa loola jeedaa in aan dowladu shaqo ku lahayn dhaqdhaqaaqa suuqa. Balse sheyga keliya ee suuqa saameyn ku yeelan karaa uu yahay alaabada la keeno iyo baahida loo qabaa inta ay le�gtahay.( Supply and demand mechanism).
Haddii computerada suuqa la keenay iyo dadka baahida u qabaa ay is le�g yhiina waxaa dhaceysa in aan qiimihii computerada wax isbedel ah oo weyni aanu ku dhicin. Mar haddaad fahamtey sida uu u shaqeeyo suuqan badeecaduhu waxaa aad u sahlanaan doonta inaad fahamto sida uu u shaqeeyo suuqa lacagaha. Farqiga kaliya ee u dhexeeyaa waxaa weeyaan iyadoo suuqaan lagu kala iibsanayo lacag halkii kii hore la kala gadanaayey computer.
Suuqa lacaguhu waa mid run ahaantii aad u weyn, walow uu badanaaba yahay suuq dahsoon oo aan u muuqan sida suuqii kale ee aan kor kaga soo hadalay. Arinta ay labadan suuq iskaga mid yihiin waxaa weeyaan, in qiimaha sheyga la kala iibsanayo ay ku xiran tahay, hadba baahida loo qabo iyo cadadka suuqa yaali inta ay le�g yihiin.
Bal aan mar kale qaadano tusaalihii aan kor ku soo sharaxnay, kolkaan sheyga la kala iibsanayaa waa dollarka mareykanka halka uu tusaalihii hore ahaa computerka. Haddii dollar badan suuqa la soo geliyo balse dadka doonayaa ay yar yihiin, waxaa dhacaysa in qiimihii dollarku uu hoos u dhaco. Baahida loo qabo dollarka waxaa ay ku xiran tahay waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin: Badeecadaha uu mareykanku soo saaro sida looga doonayo dunida kale, dadka dalxiiska ku imanaya mareykanka, iyo weliba maalgelinta lagu sameeyo suuqyada saamiyada ee wadanka mareykanka. Dhinaca kale haddii dadka dollarka doonayaa ay aad u badan yihiin,waxaa ay noqoneysaa in qiimaha dollarku uu aad kor ugu kaco.
Arrimahaas aan kor ku soo sheegnay ayaa badanaaba keena in lacagaha aduunku ay yeeshaan qiime ( price) kala duwan. Sheyga ugu muhiimsan ee qoraalkan laga faa�idi karaa waxaa weeyaan inad fahamto in suuqa lacagtu u shaqeeyo si la mid ah kan badeecada. Waxaa jira dariiqooyin xisaabeed iyo weliba garafyo arintan lagu sharixi karo. Balse waa ku adag tahay inuu fahmo qof aan dhaqaalaha ama suuqyada lacagugu sida ay u shaqeeyan aqoon. Sidaas darteed intaas ayaan ku soo koobayaa qormadan. Qofkii wax su�alo ah qaba ama doonaya in si dheeraad ah oo qoto dheer wax loogu faahfaahiyo, waxaa uu igala soo xiriiri karaa e-mailkeyga hoos ku xusan.
Xafladaha reer somaliland iyo calanka shahaadadu ku qoran tahay... Akhri..